Ukuqhawuka kwemitshato, impilo enkenenkene, ukutyiwa sisazela—ezi zezinye zezinto ezibangelwa kukunikezela kwisilingo. Ngoko singawuphepha njani lo mgibe?
Xa utsaleleka entweni uyalingeka, ingakumbi ukuba yinto engafanelekanga. Ngokomzekelo, ngoxa usevenkileni ubona into, uyirhalele. Ngoko nangoko ucinga ukuba le nto ungakwazi ukuyiba, ungabhaqwa. Isazela siyakunqanda! Ngoko uyayisusa le ngcinga. Ngaloo ndlela usoyisile isilingo.
Ukulingeka akuthethi ukuba ungumntu ombi. IBhayibhile ithi sonke siyalingwa. (1 Korinte 10:13) Eyona nto ibalulekileyo yinto esiyenzayo xa silingwa. Abanye bahlala becinga ngezinto ezingafanelekanga baze ekugqibeleni bazenze. Abanye bayeka ngoko nangoko ukucinga ngezo zinto.
Kutheni kububulumko ukusibaleka ngokukhawuleza isilingo?
IBhayibhile isibonisa izinto ezisibangela senze izinto ezimbi. UYakobi 1:15 uthi: ‘Umnqweno ongafanelekanga, xa uthe wakhawula, uzala isono.’ Ngamany’ amazwi, xa sisoloko sicinga ngezinto ezingafanelekanga, side sifikelele kwinqanaba lokuba singakwazi ukuzibamba, sizenze. Sekunjalo, singakwazi ukukuphepha ukuba ngamakhoboka ezo ngcinga, sizilawule.
INDLELA ENOKUSINCEDA NGAYO IBHAYIBHILE
Njengoko ingqondo yethu isenokugcwala yiminqweno engafanelekanga, iyakwazi nokuyikhupha. Njani? Ngokucinga ngenye into, mhlawumbi umsebenzi, incoko nomhlobo wakho, okanye ucinge ngezinye izinto ezakhayo. (Filipi 4:8) Singancedwa kukucinga ngezinto ezinokubangelwa kukunikezela kwisilingo, ezifana nokukhathazeka, ukugula okanye ukonakalisa ubuhlobo bethu noThixo. (Duteronomi 32:29) Nomthandazo ungasinceda kakhulu. UYesu Kristu wathi: ‘Thandazani ngokuqhubekayo, ukuze ningangeni ekuhendweni.’—Mateyu 26:41.
“Ningalahlekiswa: UThixo akanakwenziwa intlekisa. Loo nto ayihlwayelayo umntu, uya kuvuna kwayona.”—Galati 6:7.
Ungazikhusela njani kwisilingo?
Sijonge isilingo njengomgibe otsalela osisidenge, ongenamava okanye ongalumkanga engozini. (Yakobi 1:14) Kuba njalo ngokukhethekileyo xa ulingelwa ekuziphatheni okubi ngokwesondo okunokukukhokelela kwintlekele.—IMizekeliso 7:22, 23.
UYesu Kristu wathi: “Ukuba, ke, iliso lakho lasekunene liyakukhubekisa, linyothule ulilahle kude.” (Mateyu 5:29) Ngokuqinisekileyo uYesu wayengathi malikhutshwe ngokoqobo eli liso! Kunoko wayethetha ukuba, ukuba sifuna ukumkholisa uThixo size siphile ngonaphakade sifanele siwabhubhise amalungu ethu omzimba ekwenzeni okubi. (Kolose 3:5) Loo nto isenokuthetha ukusibaleka ngokukhawuleza isilingo. Indoda kaThixo enokholo yathandaza yathi: “Dlulisa amehlo am angaboni oko kungento yanto.”—INdumiso 119:37.
Ngokuqinisekileyo, ukuzibamba kusenokuba nzima. Ngapha koko, “inyama ibuthathaka.” (Mateyu 26:41) Siza kuzenza iimpazamo. Sekunjalo ukuba siyazisola size sizame ukwahlukana nomkhwa wokwenza okubi, uMdali wethu uYehova uThixo “unenceba nobabalo” kuthi. (INdumiso 103:8) Isithuthuzela ngokwenene loo nto.
“Ukuba ubulinda iziphoso, Ya, Owu Yehova, ngubani na obenokuma?”—INdumiso 130:3.